महिनावारी र यौनसम्पर्क - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
महिनावारी र यौनसम्पर्क
म २४ वर्षीया महिला हुँ । मेरो विवाह भएको पाँच वर्ष भयो र हाम्रो एउटा सात महिनाको शिशु छ । शिशुले मेरो दूध खादैछ । मेरो महिनावारी १ गते भएको थियो र ७ गतेदेखि लगातार एक हप्तासम्म हामीबीच यौनसम्पर्क भयो । हामीले परिवार नियोजनको कुनै साधन प्रयोग गरेका छैनौं । मेरो गर्भ रहने सम्भावना छ कि छैन ? हामीले कति–कति दिनमा सम्पर्क गरे गर्भ रहँदैन ?
दूध खाइरहेको भए पनि तपार्इंको शिशु ७ महिनाको भैसकेको र महिनावारी भैसकेका कारणले तपाईंले परिवार नियोजनका उपाय नअपनाए गर्भ रहन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
तपाईंको महिनावारी नियमित–अनियमित के छ तथा कति दिनमा हुने गरेको छ, पत्रमा उल्लेख छैन । सामान्यत: नियमित महिनावारी हुने महिलामा महिनावारी भएको १४ दिनमा अण्डा निष्कासन हुन्छ, त्यसैले यसको सेरोफेरोमा यौनसम्पर्क भए गर्भ रहन सक्छ ।
तपाईंको ७ गतेदेखि लगातार एक हप्ता सम्पर्क हुँदा अण्डा उत्पादनको समयमा पनि सम्पर्क भएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले तपार्इंको गर्भ रहने सम्भावना छ । महिनावारी भएको दिनदेखि ९ दिन सम्म र पछि गएर १९ दिनपछि मात्र सम्पर्क गरे गर्भ रहने सम्भावना कम हुन्छ ।
यद्यपि यस किसिमको प्राकृतिक उपायमा पूर्ण रूपले भर पर्न सकिँदैन ।
फाल्गुन ४, २०७५ - आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की महिनामा कतिसम्म प्रयोग गर्ने
माघ २९, २०७५ - एक रुपैयाँमा सेनेटरी प्याड दिने भेन्डिङ मेसिन
माघ २२, २०७५ - पाठेघरको मुखको क्यान्सर
शरीरमा कसरी काँडा उम्रन्छ ? फाल्गुन २७, २०७५
अब १० सेकेन्डमै सफा दाँत फाल्गुन २४, २०७५
एड्स र मलेरियाभन्दा खतरनाक सर्जरी फाल्गुन २०, २०७५
सन्तान जन्मिएको कति समयपछि  यौनसम्पर्क गर्ने ? माघ २५, २०७५
पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी क्यान्सर माघ २१, २०७५